Finance Assistant (Phyu) | Early Dawn Microfinance
Finance Assistant (Phyu)
ရုံးခွဲရှိ ငွေစီးဆင်းမှုကို ဌာနခွဲ မန်နေဂျာနှင့်အတူ စောင့်ကြည့်ထိန်းသိမ်းရန်
All Account Receivables and Account Payables များ၏ ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းနှင့် ပေးငွေများကို ပြင်ဆင်ရန်၊ စစ်ဆေးရန်၊ မှတ်တမ်းတင်ရန်။
ငွေအသုံးပြုထားသောဝန်ထမ်းများမှ တင်ထားသော မူရင်းဘောင်ချာများနှင့် ပူးတွဲစာရွက်စာတမ်းများကို စစ်ဆေးခြင်း
ငွေအသွင်း/အထုတ် စာရင်းများကို Excel file အသုံးပြု၍ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း
ဘောင်ချာများနှင့် မူရင်းစာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကို မူဝါဒအတိုင်း မှန်ကန်ပြည့်စုံခြင်း ရှိမရှိ အတည်ပြုပေးခြင်း။
ငွေကြေးနှင့်ပက်သတ်သော မူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း ရုံးခွဲရှိဝန်ထမ်းများ လိုက်နာရန်စီစစ်ပေးခြင်း
နေ့စဉ်ငွေစီးဆင်းမှုကို ဌာနခွဲ မန်နေဂျာသို့စာရင်းပို့ရန်။
ဌာနခွဲ မန်နေဂျာမှ အတည်ပြုထားပြီးသော နေ့စဉ်လက်ကျန်ငွေပမာဏကို ရုံးချုပ်ငွေကိုင်သို့ စာရင်းပို့ရန်။
အပတ်စဉ်၊ လစဉ် အသုံးစရိတ်နှင့်ပေးသွင်းငွေ၊ ရငွေများကို (တစ်လလျှင်၂ကြိမ်) စာရင်းပြုစုပြင်ဆင်ရန်၊ စာရင်းများအား သက်ဆိုင်ရာဘောင်ချာများနှင့် ဌာနခွဲ မန်နေဂျာမှ အတည်ပြုထားပြီးသော စာရွက်စာတမ်းများဖြင့် စာရင်းကိုင်ဆီသို့ တင်သွင်းရန်။
၂ပတ်တစ်ခါ လည်ပတ်ငွေ ဘတ်ဂျက်ကို ရုံးချုပ်ရှိ Sr. Finance Assistant ပေးပို့အတည်ပြုရန်။
ငွေကြေးနှင့်ပက်သတ်သော မူဝါဒ၊ အထူးသဖြင့် ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲခြင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ လိုအပ်သော စာရင်းပေးပို့ခြင်းတွင် ၀န်ထမ်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
ရုံးခွဲရှိ Admin / HR တာဝန်များတွင် ပါဝင်ကူညီခြင်း (မီတာခပေးသွင်းခြင်းအစရှိသည်ဖြင့်)
ရုံးရှိ လိုအပ်သော ပစ္စည်းများဝယ်ယူရာတွင် ပါဝင်ခြင်း
ရုံးရှိ inventory စာရင်း၊ fixed asset စာရင်းများကို စာရင်းသွင်းရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းပေးရန်
application form များကို Finance Assistant ၏ check list အတိုင်း စစ်ဆေးပေးခြင်း
MIS system ထဲသို့ အချက်အလက်များ ထည့်သွင်းခြင်း
MIS system မှ ရရှိလာသော Form များကို အပတ်စဉ် Printထုတ်ခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်း
တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိရန် (finance and accounting (သို့) သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်မှ ဘွဲ့ရရှိထားသူများကို ဦးစားပေးမည်)
Finance and accounting လုပ်သက်တစ်နှစ် အနည်းဆုံးရှိသူများ
ကြိုတင်စီစဉ်တတ်ခြင်း၊ အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူများ
Microsoft Word နှင့် Excel ကျွမ်းကျင်သူများ
ဒေသသုံးစကားနှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်သူများ
ကုမ္ပဏီ၏ ရည်မှန်းချက်များ၊တန်ဖိုးထားမှုများနှင့်စည်းမျည်းစည်းကမ်းကို လေးစားလိုက်နာနိုင်သူများ
* Medical Benefits and Insurance
* working Days = Monday to Friday
Can you work in Phyu, Bago Region?
How many relevant experience do you have in Accounting & Finance?
Financial Analyst ( YGN )
Finance AP Executive
Finance & Account (Yangon)
Finance & Account (Mandalay)
OCK Yangon Private limited